yini ukufakwa kwe-induction shrink? induction inciphisa amagiya afanele namasongo
Ikhaya / Izicelo / Yehlisa ukufakela / yini ukufakwa kwe-induction kuncipha
Isigaba: Yehlisa ukufakela Tags: thenga ukushisa okufudumele, ukushisa ukushisa izinhlelo, Induction yehlisa ukufakela, lokungeniswa kuncipha Ukushisa, Yehlisa ukulungiswa, nciphisa amasondo egiya afanelekile, nciphisa amagiya afanele, Nciphisa i-shaft efanelekayo, Nciphisa amagiya shaft afanelekayo, kuyini ukufakwa kokungeniswa kuncipha
Kuyini ukufakwa kwe-induction shrink?
Induction yehlisa ukufakela kungukusebenza okulula okubandakanya ukusikeka noma ukunwetshwa kwento eyodwa kokunye ukudala ukuphazamiseka nokwakhiwa kwengcindezi, okubambe izingxenye zombili zihlangene ngomshini.
Indlela ngayinye yokuthola izingxenye emhlanganweni inezinzuzo ezihlukile. Endabeni yokuncipha kokuncipha, izingxenye ezenziwe kunoma iyiphi insimbi zingahlanganiswa: insimbi kuya ensimbi, insimbi kuya ethusi, i-aluminium kuya ensimbi, i-magnesium kuya ensimbi, njll. isakhiwo se-metallurgical njengokushisa noma ukuncibilika. Ngenxa yokuthi kungenzeka ukugxila kokucindezeleka, ithonya lokuncipha kokuncipha kufanele lihlolwe emihlanganweni ebucayi.
Ngokwenzayo, lo msebenzi ulula, odinga ukulungiswa okuncane kwendawo, ukulawula okuncane, futhi akukho ukuhlanzwa ngemuva komhlangano njalo. Njengoba amandla okuvikela kungumshini, i-oxidation engaphezulu noma ukungcolisa akuphazamisi, kugwema noma yisiphi isidingo sokusetshenziswa kokugeleza. Izingxenye ezihlanganiswe ngokuncipha kokuncipha zingahlukaniswa ngokushisa ngokukhethekile ingxenye engaphandle. Le nqubo ifaneleka ikakhulukazi ekushiseni kwe-induction ngezinga layo lokushisa okusheshayo nokunemba, okuvumela ukushintshwa kwezingxenye ezigugile noma ukulungiswa kokuqondanisa.
Ukushisa ukushisa imvamisa inikeza izinzuzo ezihlukile ekunciphiseni kokulingana. Ukushisa kungabekwa endaweni, kuhlinzeke ukwandiswa okwanele endaweni okwenzelwe ukuncipha ngaphandle kokushisa konke ukusakaza okukhulu noma into eyenziwe ngomshini ngokucophelela, kunciphisa ukuphazamiseka. Lokhu kushisa okusheshayo, okukhethiwe futhi kusiza ukuhlukaniswa kwezinto ezingafakwanga izinto, njengoba kushiwo ngenhla. Ngokwengeziwe, ukushisa kwe-induction kunikela ngenqubo engenacala, esheshayo, ephindaphindekayo engafakwa ekukhiqizweni kokuphathwa okuncane nokuzenzekelayo okulula.
I-HLQ ukushisa ukushisa izinhlelo asetshenziswa embonini yezimoto ukuncipha kwamagiya afanele namasongo. Babuye baqashwe ukulungisa izindiza, izitimela namaloli. Amasistimu ethu eselula asetshenziselwa ukunciphisa imisebenzi yokulinganisa emapulatifomu aselwandle futhi asetshenziswa kakhulu ukususa amantongomane amakhulu namabhawodi ezimishini zokuphehla ugesi.
Imvamisa, izinsimbi zizokwanda ngokuphendula ukushisa nenkontileka lapho kupholile. Le mpendulo enobukhulu ekushintsheni kokushisa yaziwa ngokuthi ukunwetshwa okushisayo. Ukufakwa kwe-induction shrink kulapho sisebenzisa lo mphumela ukulingana noma ukususa izingxenye. Ingxenye yensimbi ifudunyezwa ibe phakathi kuka-150 ° C no-300 ° C okuyenza ukuthi ikhule futhi ivumele ukufakwa noma ukususwa kwenye ingxenye. Isibonelo, lapho kufakwa izingxenye ezimbili zepayipi ndawonye, ​​ingxenye eyodwa iyafudunyezwa kuze kube yilapho ububanzi bayo bunwetshwa ngokwanele ukuthi bufakwe kwenye ingxenye. Lapho izingxenye ezihlanganisiwe zibuyela ezingeni lokushisa elizungezile, ilunga liyaxinwa futhi liqine - 'ukuncipha kufakwe'. Ngokufanayo, ukunwetshwa okushisayo kungasetshenziswa kukhulule ukujoyina ngaphambi kokuqaqa.
Inqubo yokulawulwa, ukungaguquguquki, ukunemba kanye nejubane kuyizinzuzo ezibalulekile zokufakwa kwe-induction shrink. Ukulethwa kokushisa kokungeniswa kunembile kakhulu. Ngenxa yokushisa okwenziwa ngaphakathi kwengxenye, ushisa kuphela ingxenye ofuna ukuyishisa, hhayi umoya oyizungezile. Kanye nokunciphisa ubungozi be-ovality, lokhu kusebenza ngamandla. Ngokwengeziwe, njengoba ukungeniswa kukhiqiza ukushisa okungaguquguquki okufanayo, lokhu kuvumela ukusetshenziswa okuncane kokushisa. Ukulawulwa kwethempelethi kunembile ngokulawulwa okuqondile kwezikhathi zokumisa phezulu kanye namazinga okushisa abambe. Ngokungafani nezindlela zokushisa zendabuko, ukufakwa kungabandakanyi ilangabi elinqunu. Lokhu kuvumela ukufakwa kwe-induction shrink ukuthi kusetshenziswe ezinhlobonhlobo zezicelo ezindaweni eziguquguqukayo, ikakhulukazi kuzicelo ze-petrochemical.
Izinhlobo ezahlukahlukene zezimboni nezicelo zingazuza ekungenisweni kokuncipha kokungeniswa. Amasistimu ethu wokushisa wokungeniswa asetshenziswa embonini yezimoto ukunciphisa amagiya afanele, ukuthwala namasongo. Baqashwe embonini yemishini kanye nasekulondolozeni izindiza nezitimela. Amasistimu ethu eselula asetshenziselwa ukunciphisa imisebenzi yokulinganisa emikhunjini nasezisekelweni ezingaphesheya kwezilwandle futhi isetshenziswa kakhulu ukulingana nokususa amantongomane amakhulu namabhawodi ezintanjeni zeziteshi zamandla kanjalo namabheringi kanye nemiphini kuma-generator kagesi omoya.
Inqubo yokuncipha yokuncipha ye-induction ijwayele ukusetshenziselwa izinqubo ezilandelayo:
Ukungena emasondweni egiya (amaphini emiphini, njll.)
• Amakhava ama-refrigerant compressors
• Ama-Morse tapers amathuluzi omshini
• Izingxenye ezijikayo zama-turbine.
I-Fives ihlangabezana nokucaciswa kwazo zonke izinhlobo zamasegmenti athuthukile kwezobuchwepheshe embonini ye-aerospace ngezinqubo eziqinisekisayo ukufakwa kokunciphisa ukulungiswa ngokunemba futhi ungangcolisi indawo yangaphakathi, ikakhulukazi lapho kuhlanganiswa izingxenye ezithambile.